DecideAlready: Capture na nzaghachi nzaghachi | Martech Zone
Kpebie ugbua: Ihe nbudata na nzaghachi ọkwa
Anyị hụrụ ngwaọrụ ndị na-eweghara ozi sitere n'aka ndị ahịa, mana ọ nweghị n'ezie ihe ngwọta ọ bụla. Oge ụfọdụ ịchọrọ nhọrọ nhọrọ dị iche iche, oge ụfọdụ ajụjụ na azịza na-agbanwe agbanwe, oge ndị ọzọ ịchọrọ ịhazi onwe. A gwara m ka m bụrụ Onyeikpe na Indianapolis ' TechPoint Mira onyinye maka 2014 na Joshua Hall na-eji ngwa maka ndị ikpe iji jide ozi ma tụọ votu na nhọpụta ọ bụla. Ọ bụ nnukwu ngwa ọrụ nke ọzọ bụ ihe ọhụụ incubators na SproutBox.
Etu esi ekpebi ugbua
Kpebie dịtụ iche na ndị ọzọ… ọ bụ ngwa ngwa (na nke a na - akwụghị ụgwọ ugbu a) nke na - enyere gị aka kesaa ajụjụ ịtụ vootu ma ọ bụ n'usoro ma nweta ọsịsa ngwa ngwa na enweghị isi.
Ndị a bụ ihe kpatara 5 iji debanye na DecideAlready:
Ọ bụ n'efu! Iji Mee mkpebiDị iji mee mkpebi bụ n'efu. Decisionzọ mkpebi anyị dị mfe ma dị elu ga-abụ n'efu. Ọbụna usoro mkpebi anyị dị elu, na-egosipụta DecideAlready Decision Machine bụ n'efu maka obere oge.
Kwụsị iwe iwe Email 'zaghachi-Alls' - Mgbe ị jụrụ otu ndị mmadụ maka echiche ha site na email, ị na-ebutekarị azịza na-adịghị agwụ agwụ nke azịza. Ọtụtụ n’ime ndị sonyere gị nwere mmasị n’ikwu okwu ha karịa ịnụ ihe onye ọ bụla kwuru.
Mee Mkpebi Ngwa Ngwa - decisionsfọdụ mkpebi dị mkpa ime ngwa ngwa. Kpebie ugbua rịọ nzaghachi ozugbo ma gbakọọ nsonaazụ na ịga. Have nwere nhọrọ igbochi oge maka nzaghachi. Mkpebi Mkpebi Mkpebi Ahụ nwere ike gbakọọ nsonaazụ gị na akpaghị aka ma zigara ndị sonyere gị mkpebi ikpeazụ.
Nwee ntụkwasị obi. Mee Nkwenye - Mgbe ị na-eme mkpebi site na iji DecideAlready, ndị niile sonyere gị ga-ama na a nụrụ olu ha. Ha ga-amarakwa na a tụlere ntinye ha n'ụzọ ziri ezi, yana mkpebi emere n'ọrụ.
Igwe Mkpebi - Ọ dị ike, ọ dịkwa ụtọ! Mkpebi Mkpebi Mkpebi Mkpebi Ikpebi Ekpe ga - enyere gị aka ịme ọbụna mkpebi ndị dị mgbagwoju anya. Ndị na-eso gị nwere ike ịza azịza gị ọ bụla dabere na ọtụtụ njirisi. Mgbe ịme ntuli aka na-emechi, ị nwere ike ịgbanwe mkpa nke njirisi ọ bụla. Mkpebi Mkpebi ahụ na-akọwa mmetụta nke omume gị na mkpebi ikpeazụ ozugbo!
Tags: mkpebimkpebimkpebinyochaigbennyocha e mere
Ahịa Digital & Mmetụta nke vidiyo
Ndụmọdụ Top maka Writde Ozi SMS Ozi Ọma